युवा नेतृत्व - Ganatantra Online
अबिसेक डाँगी,काठमाडौं । युवा पुस्ताबारे बहस गरिरहँदा हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने वा हामीले बहसको केन्द्रमा राखेका युवा को हुन् ? युवा भन्नेबित्तिकै वैज्ञानिक रूपमा पनि निश्चित उमेर समूहसँग जोडिन्छ । जिन्दगीका अनेक कष्टहरूबाट झेलिँदै गाँस, वास, कपास र एउटा सुरक्षित जीवनको परिकल्पनामा देशभित्र र बाहिर श्रममा हेलिएको युवाहरूसँग राख्ने अपेक्षाहरू कत्तिको वस्तुनिष्ठ हुन्छन् ? नेपाली समाजले आजको युवासँग राख्ने अपेक्षा र हामीले राखेको नेतृत्वको अपेक्षा तादात्म्य छ ? हामीले खोजेको नेतृत्व खास उमेर समूहसँग मात्र जोडिएको हो कि उसका विविध आयाम र प्रश्नहरूमा निर्भीक उभिन सक्ने भिजन, आचरण एवं व्यवहार भएको हो ?
आफ्नो विवेकलाई समाजको अपेक्षासँग बन्दकी राखेर होइन, सत्यको खोजी गर्दै संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न युवासँग जति पनि गर्न सकिन्छ । तर ती प्रश्नको तीर अलि बलियो गरी समाजतिर पनि तेर्साउनुपर्ने भएको छ । जसको अपेक्षा पूरा गर्ने लालसामा आफ्ना सपना मारेर जिउन विवश युवा पुस्ता पनि त समाजले नै तयार पारिरहेको छ । डा गोविन्द केसीको अभियानमा प्लेकार्ड बोकेर माइतीघर मण्डलामा उभिएर फेसबुकमा फोटो हाल्नुसम्म
त ठीकै छ तर राज्य प्रणालीका जटिल मुद्दाहरूमा धेरै प्रश्न नगरोस्, समाजका आधारभूत र मूल्य–मान्यतामा प्रश्न नगरोस् भनेर लक्ष्मण रेखा राखिदिने पनि यही समाज नै हो ।
नेतृत्व संकटबाटै आउँछ, अमन
चयनमाझ साइत हेरेर नेतृत्व आउने त होइन तर युवाप्रति नेतृत्वको अपेक्षा गरेर उनीहरूलाई प्रश्न गर्दा समाजलाई बुझ्ने र प्रश्न गर्न छाड्नु भएन ।
एउटा युग नायक आएर हामी सबैलाई उद्धार गरिदिनेछ भन्ने आम अपेक्षा नै गलत हुने नै भयो । आफ्ना सबै आकांक्षाहरू एक जना नेतालाई बोकाइदिएपछि हाम्रोजस्तो जटिल र जड संरचनामा भेटिने त निराशा मात्रै हो । बहसहरू को नेता ठीक र को गलत भन्नेबाट समाजलाई नयाँ यात्रामा डोर्‍याउने नेतृत्व कस्तो हो भन्नेतिर मोडिँदा त्यो भनेको प्रक्रिया पनि हो भन्ने बुझिन्छ । यो प्रक्रिया एक्लै चाल्ने होइन, एक्लै दौडेर समाजका जटिल मुद्दाको हल खोज्न पनि सकिन्न, सामुदायिकतामा कसरी नेतृत्व खोज्ने र सामूहिक पहलहरूबाट रूपान्तरणको
बाटो अघि पर्गेल्न थप मन्थनहरू आवश्यक छन् ।
लुम्बिनी विश्वको आकर्षणको केन्द्र भएकाले विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखौँ: राष्ट्रपति…